lotaya – Page3– The Voice Journal
သမီး ‘ရှီ’ နှင့် တရုတ်အမျိုးသားရေးဝါဒီ ပြန်တော်ပြန်များ
Foreign Affairs / lotaya
ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့က ကျင်းပပြီးစီးသွားခဲ့သည့် ထိုင်ဝမ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကို အမှန်တကယ်ရှိသည့် ပို၍ရှုပ်ထွေးသွားဖွယ်ရှိသည်။ တရုတ်ပြည်မကြီးကိုဆန့်ကျင်သော လက်ရှိထိုင်ဝမ်သမ္မတ စိုင်းအင်းဝန် ပြတ်ပြတ်သားသားအနိုင်ရလိုက်ခြင်းသည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံငယ်များကို တွန်းအားပေးလေ့ရှိသော တရုတ်၏အလေ့အထများကို မနှစ်မြို့သူများအတွက် အောင်ပွဲပင်ဖြစ်သည်။ သူမ သောင်ပြိုကမ်းပြို အနိုင်ရလိုက်ခြင်းမှာ...
Feature / lotaya
ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့် ဈေးဝယ်အိတ်လေးများကို သွားလေရာသယ်ဆောင်သူများလာသည့်အပြင် ထမင်းဘူးအလွတ်၊ ကော်ဖီဘူး၊ ဇွန်းခက်ရင်းနှင့်တူ ပါဝင်သည့် အိတ်ငယ်ကိုလည်း ယူဆောင်သွားလာကြသူများရှိလာသည်။ အကြောင်းမူကား မြေကမ္ဘာကိုဖျက်ဆီးသည့် ရန်သူတော်ကြွပ်ကြွပ်အိတ်များ အသုံးမပြုလိုတော့၍ ဖြစ်သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို စိတ်ဝင်စားချစ်မြတ်နိုးသူများသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုနည်းအောင် ပြုမူနေထိုင်ကြရင်း ပလတ်စတစ်ဖြင့်...
Articles / lotaya / Mandalay / Politics
နိုင်ငံတော်မှ စွန့်လွှတ်ထားသည့်မြေပေါ်၌ မမှန်မကန်လုပ်ဆောင်ခြင်းများကြောင့် ဖယ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်ဟုဆိုသူက တောင်သူဦးမောင်ခိုင် ဖြစ်သည်။ မိဘများလက်ထက်မှစ၍ ကတက်ချဉ် စိုက်ကွင်းအတွင်း လုပ်ကိုင်လာခဲ့ပြီး ယင်းကဲ့သို့ ဖယ်ရှားခိုင်းခြင်းအပေါ် သဘောမတူဟုဆိုကာ ထွန်တုံးတိုက်ပွဲများပြုလုပ်နေသည်ဟု ပတ်လည်အင်းကျေးရွာတောင်သူ လယ်သမားသမဂ္ဂ၏ ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သည့် ဦးမောင်ခိုင်က ပြောသည်။ “သူတို့နဲ့...
အီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆိုလာမာနီမှာ အီရတ်နိုင်ငံ၌ အမေရိကန်က မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ အီရန်ကလည်း လက်တုံပြန်သည့်အနေနှင့် အီရတ်ရှိ အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းအချို့ကို တာတိုပစ်တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကျည်များဖြင့် ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ အီရတ်အတွက် အကျပ်ဆိုက်သော အချိန်ကာလများပင်။ တကယ်တမ်းဆိုရပါလျှင် အီရတ်အကျပ်အတည်းမှာ ၂၀၁၉ အောက်တိုဘာလကတည်းက...
Articles / Health / Lifestyle / lotaya
ဓမ္မတာမလာမီ ခံစားရတဲ့ဝေဒနာများနဲ့ ဓာတ်စာ
အမျိုးသမီးအချို့မှာ ဓမ္မတာလာချိန်အတွင်း ဟော်မုန်းပမာဏအပြောင်းအလဲကြောင့် ဝေဒနာခံစားရပါတယ်။ ဓမ္မတာလာတဲ့ အမျိုးသမီး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရပြီး ၁ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အလုပ်ခွင်မှာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တဲ့အထိ တွေ့ကြုံရပါတယ်။ ဒီလိုခံစားရတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာကို ရာသီမလာခင် နာကျင်မှု...
စာဖတ်သူများ ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေး စသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးနှင့်ပတ်သက်၍ စာဖတ်ပရိသတ်များ၏ စုံလင်ထွေပြားခြားနားသော အမြင်ရှုထောင့်များကို The Voice Journal...
ပြင်ပ ပယောဂမရှိလျှင် ယခုကာလသည် ပြည်တွင်း၌ အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေး ကျဆင်းလေ့ရှိသည့်အချိန် ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှ စတင်ကာ အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေး စတင်ကျရိပ်ပြခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ယင်းနှစ်၏ အနိမ့်ဆုံးဈေးဖြင့် ၂၀၁၉...
Articles / Foreign Affairs / lotaya / Politics
မူဝါဒကောင်းများကို စောင့်မျှော်နေသော မြန်မာ့ဓာတ်ငွေ့သိုက်အသစ်များ
မြန်မာအစိုးရသည် ကမ်းလွန်ရေနံ လုပ်ငန်းလုပ်ကွက် ၁၅ ခု၊ ကုန်တွင်းပိုင်း ရေနံလုပ်ငန်းလုပ်ကွက် ၁၈ ခု အပါအဝင် အဓိကကျသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရှာဖွေရေးလုပ်ကွက်များအတွက် တင်ဒါအသစ်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားဖွယ်ရှိသည်။ ယင်းကြေညာချက်မှာ ထုံထိုင်းလေးလံလျက်သော်လည်း အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည့် အလားအလာကောင်းများရှိသော ရေနံနှင့်...
ပွဲတော်ရဲ့ တကယ့်အမည်အပြည့်အစုံကတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်တစ်ရာပြည့် အမှတ်သညာပွဲတော်ပါ။ ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အက်ဥပဒေအရ ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ မှာ အခမ်းအနားနဲ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့သက်တမ်းက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဆိုရင်...
ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာ Yuval Noah Harari ၏ အရောင်းရဆုံးစာအုပ်စာရင်းဝင် 21 Lessons for the 21st Century စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်ဆိုဖော်ပြပါသည်။ သင်ခန်းစာ (၁၂) နှိမ့်ချခြင်း (အပိုင်း – ၅)...
ဝေဖန်သံဖြင့် စဖွင့်သည့် လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သစ်